Ihowuliseyili isibiyeli womserbia esingenazingcingo Umenzi kunye noMthengisi | Sheerfond
Le yimveliso yesikhumba, indawo yokuma ephathekayo kunye nesiphatho esiphathwayo, ngetshaja engenazingcingo, ungayila ngokwezifiso, ilogo okanye ukupakisha. Zimbini iindlela zokubeka ifowuni, isikrini esithe tyaba okanye isikrini esime nkqo. Ngayiphi na indlela, umnini weselfowuni unokuqinisekisa ukuba ifowuni inokuhlawuliswa xa ifowuni ikwisikrini esithe tyaba okanye ethe nkqo. Ngelixa ubiza, ungabukela iividiyo kwifowuni evuliwe; Isongelwe, ingama-8mm kuphela emva kokugoqwa, kwaye inokufakwa epokothweni. Kwakhona ...
Le yimveliso yesikhumba, indawo yokuma ephathekayo kunye nesiphatho esiphathwayo, ngetshaja engenazingcingo, ungayila ngokwezifiso, ilogo okanye ukupakisha.
Zimbini iindlela zokubeka ifowuni, isikrini esithe tyaba okanye isikrini esime nkqo. Ngayiphi na indlela, umnini weselfowuni unokuqinisekisa ukuba ifowuni inokuhlawuliswa xa ifowuni ikwisikrini esithe tyaba okanye ethe nkqo. Ngelixa ubiza, ungabukela iividiyo kwifowuni evuliwe;
Isongelwe, ingama-8mm kuphela emva kokugoqwa, kwaye inokufakwa epokothweni.
Ikwangumnini wepeni onendawo yokufaka usiba ngasemva kwesiphathi, kwaye iyimveliso yokugcina indawo yedesktop.
Ngaba le mveliso igqibelele? Siyathemba ukuba izibonelelo zethu kuyilo lwemveliso zingakuzisa kunye nabathengi bakho ngamava amahle.
Le mveliso yoyilo inobubele kwi-Eco, sebenzisa izinto ezinokuthotywa
Ishaja engenazingcingo yeQi ikhawulezisa ukutshaja i-10W, i-15W yefowuni, njenge-iphone 12
Ishaja yokuyila engenazingcingo yeyona mveliso yam intsha,
Ukutshaja ngeefowuni eziphathwayo kunokusetyenziselwa isipho sokukhuthaza ishishini, Nika kude iZipho zeShishini, isipho sasimahla okanye esinye isipho,
Izixhobo ze-iphone yimibono emitsha yemveliso yeapile kunye nezinye iifowuni eziphathwayo,
Inkampani yam ngumzi mveliso we-OEM kunye nomzi mveliso we-elektroniki, sikwangumboneleli weWal-Mart. Izinto zethu eziluhlaza, iinkqubo zokuvelisa kunye neemveliso ezigqityiweyo zivavanywa nge-100% ukuqinisekisa ukuba yonke imveliso iyimveliso efanelekileyo.
Umzekelo No. I-SN002
Igalelo 9V1.5A / 5V2A
Izixhobo intambo encinci
Ukutshaja ngaphandle kwamacingo NgamaGr10W / 7.5W / 5W
Imeko zokuSebenzisa Pr Amashishini amatsha aBonelela ngeZinto,
Izinto eziphathekayo DB
Ilogo yoshicilelo: Elungiselelweyo Ilogo
Uyilo Uyilo olwenziwe ngentando
ubungakanani bemveliso 370mm * 75mm * 4mm
ubunzima bemveliso 100g
ubungakanani bokupakisha 200mm * 78 * 15mm
Inani kwibhokisi nganye
Ubunzima kwibhokisi nganye 16kg
Egqithileyo Ukutshaja ngaphandle kwamacingo isipaji samandla eselfowuni
Okulandelayo: Ubushushu beGraphene imaski yamehlo
Ikhalenda yokutshaja engenazingcingo
Iphedi yemouse yokutshaja ngaphandle kwamacingo